लोकगायक त्यतिकै भइन्छ ? तस्बिरमा खगेन्द्र यक्सोको संघर्ष | Screennepal
लोकगायक त्यतिकै भइन्छ ? तस्बिरमा खगेन्द्र यक्सोको संघर्ष
२०७२, ३१ जेष्ठ आईतवार १२:५६screennepalfeature, Music0
दिनदिनै लोकगीत त रेर्कड भइरहेका छन् । तर, ती लोकगीत राजधानीमै बसेर सिर्जना गरिएको हुन्छ । यस्तो प्रबृति भनेको ताप्लेजुङमा गएको पहिरोको काठमाडौंमा बसेर समीक्षा गर्नुजस्तै हो । यस्तै, प्रबृतिका कारण पछिल्लो समय लोकगीतको गरिमा ओझेलमा पर्दै गएको खगेन्द्रको धारणा छ ।
काठमाडौं । ‘खगेन्द्र यक्सो चलेका हुन् कि उनका गीत हो ?’ पूर्वी ताप्लेजुङका एक हजुर बा’ले केही समयअघि लोकगायक खगेन्द्र यक्सोका बारेमा यस्तै कौतुहलता कोट्याउँदै थिए । छेवैमा बस्ने एक तन्नेरीले ठट्यौलीमै भने, ‘उस्तै–उस्तै हो बाजे । गीत चलेर खगेन्द्र चलेका हुन् भने खगेन्द्र चलेर गीत हिट भएका हुन् ।’
वास्तवमै खगेन्द्रलाई पूर्वेली लोकगीतले खगेन्द्र बनेका हुन् भने उनले पूर्वेली लोकगीत बनाएका हुन् किनकि, अँध्यारो कोठामा बसेर लोकगीत सिर्जना गर्ने जमातबाट खगेन्द्र अलग छन् । उनको मान्यता छ, ‘लोकगीत भनेको गाउँघरको मेलापात र हाटबजार र डाँडाकाँडामा खोजेर ल्याउनुपर्छ ।’ तर, उनले भनेजस्तो यहाँ हिजोआज लोकगीत संकलक पाइँदैनन् । दिनदिनै लोकगीत त रेर्कड भइरहेका छन् । तर, ती लोकगीत राजधानीमै बसेर सिर्जना गरिएको हुन्छ । यस्तो प्रबृति भनेको ताप्लेजुङमा गएको पहिरोको काठमाडौंमा बसेर समीक्षा गर्नुजस्तै हो । यस्तै, प्रबृतिका कारण पछिल्लो समय लोकगीतको गरिमा ओझेलमा पर्दै गएको खगेन्द्रको धारणा छ ।
खगेन्द्र ताप्लेजुङको विकट गाउँमा जन्मिएका हुन् । आज त्यही भएर पनि लोकगायक खगेन्द्र यक्सोको पहिचान बनाउन सफल भएका छन् । साढे दुई दशकभन्दा बढी समय लोक गायनमै बिताइसकेका खगेन्द्रको गीतमा दमसँगै पहिचान छ । त्यो पहिचानभित्र उनले गाउँघर, मेलापात, हाटबजार, सुखदुख र माया प्रेम सबै अँटाएका हुन्छन् । ‘माघेनी मेला’ होस् वा ‘चुङवा दोभान’ नै किन नहोस् । अनि ‘खोरुङवा खोला’ मात्रै नभएर ‘तीनतले साइँली’ नै किन नहोस् । खगेन्द्रको यी गीतमा साँच्चीकै पूर्वेली लोक गाइएको छ । खगेन्द्र भन्छन्, ‘लोकगीत भनेकै गाउँघरमा बोलिने भाषा, गाईभैसी चराउँदा गाइने गीत हो । जुन ठाउँ र स्थानको बारेमा लोकगीत गाइन्छ, त्यो गीतमा त्यो ठाउँ झल्किनुपर्छ । परिवेश सुहाउँदो भएन भने त्यो लोकगीत नै हुँदैन ।’ यस्तै धारणाले पनि होला, उनी एउटा लोकगीत बनाउनका लागि गाउँठाउँ चहार्छन् र बुढापाकाहरुसँग गफिन्छन् । जसले गर्दा उनलाई ठेट लोकगीतको सिर्जना गर्न सजिलो हुन्छ ।
खगेन्द्रले दर्जनौ गीत गाएका छन् । उनले संकलन तथा लय निकालेपछि गाउँघरको मेलापात र हाटबजारमा तन्नेरी तरुनीहरुले गाउँछन् । खगेन्द्रको लोकगायकको पहिचान भनेकै यही हो । खगेन्द्र पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र धनकुटातिरको परिवेश गाउँछन् । उनका गीत प्राय लिम्बू परिवेश र संस्कृति झल्किने खालका हुन्छन् । त्यसैले पनि उनी पुर्वका लोकप्रिय गायक बन्न सफल भएका छन् । खगेन्द्र पूर्वेली रहन–सहनलाई लोकगीतमा टपक्क टिप्न मात्र सिपालु छैनन् । उनी मायापिरतीका स्वादिला भाका उन्न पनि उत्तिकै खप्पिस मानिन्छन् । त्यसैले त उनी पूर्वेली तरुनी तन्नेरीका ढुकढकीमा बस्न सफल भएका छन् । कतिपयले खगेन्द्रकै गीत हाटबजार र मेलापामा गाएर घरजम पनि बसालेका छन् । खगेन्द्र गाएका गीत अरुले गाउन साह्रै सजिलो तर त्यो लोकगीत तयार गर्न संघर्ष र उनको मिहिनेत बुझ्न उत्ति नै कठिन छ । हरौं लोकगीत संकलनमा खगेन्द्रले गरेको संघर्षको तस्बिर ।
Previous Postफोहोर टिप्दै सुन्दरीहरु (फोटोफिचर) Next Postसिरियामा बेचिएकी चेलीलाई सम्मानपूर्वक फिर्ता गरौं : रेखा